Banaanbax ku aadan dilkii Osama Bin Ladin oo manta ka dhacay Muqdisho (sawiro) – SBC
Banaanbax ku aadan dilkii Osama Bin Ladin oo manta ka dhacay Muqdisho (sawiro)
Banaanbax ay soo abaabushay DFKMG ah ee Soomaaliya oo lagu taageerey dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida Osama BIN Ladin oo Mareykanku Pakistaan ku dileen ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Banaanbaxan oo ka dhacay goobaha ay dawlada KMG ah gacanta ku hayso ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galey wateen boorar & halku dhegyo ay kaga soo horjeedaabhOsama Bin Ladin iyo saraakiisha sar sar ee xarakada Al-Shabaab.
Xubno ka mid ah DFKMG ah iyo ururka Ahlu Sunna Waljameeca oo ay dagaalo kala dhaxeeyaan xarakada Shabaabka ayaa banaanbaxaasi hadalo kala duwan ka jeediyey iyagoo muujiyey sida ay raaliga uga yihiin uguna qanacsan yihiin dilka Osama Bin Ladin. Xildhibaan Xuseen Caraale Cadaan oo ka mid ah xildhibaanadii Baarlamanka Soomaaliya oo ka mid ahaa xubnihii banaanbaxaasi ka qayb galey ayaa sheegay waa sida hadalka uu u dhigaye in Al-Shabaab ay ka hesho taageero Al-Qaacida, isagoo ka codsadey ka qayb galayaashii banaanbaxa iyo dadweynaha Soomaaliyeed inay taageeradooda siiyaan ciidamada DFKMG ah ee Soomaaliya ee dagaalka kula jirta xoogaga Shabaabka oo uu ku sheegay kuwa caqabad ku ah nabadda & amaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Caraale wuxuu muujiyey sida dawlada KMG ah ee Soomaaliya u soo dhaweynayso dilka hogaamiyaha Al-Qaacida waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay nabad u filayaan xili dhaw oo loo baahan yahay in dawlada la taageero. Banaanbaxayaasha amaankooda waxaa sugayey ciidamo ka tirsan dawlada KMG ah ee Soomaaliya iyagoo socod ku soo marey goobo ka mid ah xarumaha dawlada ay maamusho.
Shiiq C/qaadir Soomow oo ka tirsan Ururka Ahlu-Sunah Waljamaaca oo ka hadley banaanbaxaasi ayaa sheegay in ururkoodu uu soo dhaweynayo dilka Osama Bin Ladin isagoo intaasi ku darey in Al-Shabaab ay ka mid tahay Al-Qaacida sida uu sheegay Soomow.
Shiiq C/qaadir Soomow wuxuu farta ku fiiqay in diinta Islaamka aanay aheyn diin dadka lagu gaaleysiiyo balse ay tahay diin saldhigeedu yahay nasteexo Gudoomiyaha daladda Ururada bulshada Rayidka ah ee gobolka Banaadir Muxudiin Xasan Afrax oo isna banaanbaxaasi ka hadley ayaa sheegay in banaanbaxaani uu yahay mid lagu taageerayo geeridii Usaama Binlaadin iyo horumarka Xukuumadda KMG ay ka gaartay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Banaanbaxayaasha ayaa ugu dambeyntii waxay ku soo afmeereen socodkooda Barxadii Iskaashatada gaadiidka ee kasoo horjeeda Ex-fiyoore ee oo ah halbowlaha goob aha ay dawladu gacanta ku hasyo.
Sawirada: Xigasgho: Radio Muqdisho
bismilaah,,,,,,,,,,,,,,,,,aad ayaan uga xumahay waxxa muqdisho ka soconaya,,,,,,,,,,,,,,,mar ay laayaan dadka aan waxba galabsan ,,,,,,,,,,iyo marakan oo ay ku farxayaan qof islaama dhimashadiisa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ayagoo raba inay maraykanka iyo gaalada is tusaan ,,,,,,,,,shariif ku awalba waa uu taageeri jiray ma hadda oo uu president yahay ayuu saas u amrayaa shacabka muqdiso,,,,,,,,,,,,,,,aad ayaan uga xumahay waxas oo kale ,,,,,,,osam haddi uu dhintay allaha naxariis siiyo waxa uu aha nin ka baxay caalamka islaamka ah,,,,,,,,,,,,,,,,gaala iyo yuhuudna waa in lala dagaalamaa ilaa xad ,,,,,,,,,,,inshaa allah waxa aan rajaynayaa in islaamku guulaystaan ,,,,,,,,,,,,,,,,
abdirashid jama says:
LAA XAWLA WALAA QAWATA ILAA BILAAHIL CALIYUL CADIIM WAA MXAYY\_ DHAQANKAANI WAA MAXAY DABEECADAAN MA WUXUU MOODAY INUU SHARIIF KUSII AHAANAYO MADAX WAYNE KU FARAX DHIBKA ISLAMKA DAWLDAANI MAAHAN MID SOOMAALIYEED AWAL WAAN LAYAABANAYN MARKII AY ALSHABAAB DHIHII JIREEN DAWLADAAN WAA RIDDO LAKIN HADDA WAXAAD MOODAA INA CALAAMAIHII AY SHEEGI JIREEN INAY WAX KAMUUQDAAN